WAR HADA AH:Kornayl Caare oo Tageeradi Ugu Xoganayd iyo Hub Helay iskuna Diyaariyey Xorayn sanaag
May 15, 2019 marqaan Wararka Maanta 10
dalka Uk waxaa Lagu qabanayaa Shirkii Ugu balaadhnaa oo lagu tageerayo Kornaylka dagaalka Kula Jira Mamaulka Soomaliland ee Caare ,waxaana Lacago loogu yaboohayaa Jabhada Caare Shir ka Dhacaya dalka Uk oo jaaliyada Soo qaban Qaabisay.
Jaaliyada Isaxaaq Care ee UK Ayaa Shirkani Ku iclaamiyey Inay ku qabanayaan Magaalada Birmingham ee dalka Uk,Gar Ahaana Hotelka AMOORE HALL, 37 WHITMORE ROAD, B10 ONR,Kadibna Waxaa lacago loogu Uruurinaya Jabhada Si dagaal Ula Gasho maamulka Muuse Biixi.
Maamulka Soomaliland Ayaa Ku Eedeyey Shirkaasi Inay wadaan dad ka Tirsan Dowlada faderalka Soomaaliya iyo Kuwo Xilal ka Waayey maamulkiisa.
Kornayl Caare Ayaa la Amin san yahay Inuu ku sugan yahay Duleedka Gobolka Karkaar ee Qardho halkaasi oo uu kasoo diyaarinayo dagaal uu kula Wareegayo Gobolka sanaag,waxaana uu Soomaliland uga Goostay cadaalad daro.
(halkani Riix Video Daawo)
Caqli gorofa, is mahadin kama ilbaxaan miyaa?. *SNM is cuna!!! Oo bellihi kale MA waitin list bay idinkugu jiraan oo waxay sugaan AARKI soo baxa oo xukumi lahaa?. *War joojiya waalida oo ciddi rabta inay bedesho Muuse Biixi HA HESHO beelaha kale ee reer Waqooyi. WBT
Ugu horeyn kusoo dhawow Marqaanweyne. Waa iska Ramadaan oo waa la iska mashquulsan yahay. Waan arkey cishadaad meeshan toos ugu soo wareegtay fariintaadiina waan akhriyay.
Xerta Kalshaale iyo halkan marka la’is barbar dhigo, xertaasaa kuwan dhaama. Waxaan kugula talin lahaa inaanad cadho darteed sidaas uga laalaaban gogoshaada ood markaad cadho baxdo aad ku noqotaa xertaadii aad inta badan ka midka aheyd. Waayo halkani waa jaantaa furan oo bilaa magac miidhanbaa hoosta la’iskaga caayaa. Dad aan damiirk qabta iyo wax kaa damiinta laheyn ayaa soo gala oo lugtay meeshan ku walaaqaan. In yar oo qadiim ah oon magacyadooda sidii xuubkii iska siibin mooyaane inta kale meel loo raaco malahan.
Halkan iskaga wada tag ku odhan maayo oo xorbaad u tahay. sOmalilanderba halkan iyo halkaasba joogto ayuu fikradiisa uga dhiibtaa, Laaleys, Aarka Hargeysa iyo Barwaaqoba halkaasna wey joogaan halkana fooda wey soo geliyaan inkastoo waayadan danbe ay dhif iyo naadir ku yihiin.
Anigu Kalshaale beribaan fooda soo Yara geli is idhoo qoraalba wuu ii geli waayay, anna wakhti badanba ma hayo oo farahaan ka laabtay. Laakiinse dushaan kaftanka odoyadaas gaamuray kala socdaa. Yacni spectator baan ka ahay. Hadaba xertaas ayaa ka kaftan wanaagsan kuwane dib iskaga noqo waan hubaa oo wey kusoo dhaweyn doonaane.
Korneyl Caare iyo Habar Yoonistu in badan oo ka mid ahi wali qaddiyaddii ‘Isaaqiyada’ ayaa ku mudan oo ash ma aha. Habar Jeclo oo ay aanooyin qoto dheeri ka dhexeeyaan iyo Habar Awal oo siyaasad ahaan qaddiyaddii SNM ku la xulufoobay ayay Habar Yoonistu diidmadooda iyo isu qaban kari la’dahay mabda’a Isaaqiyada ee ay aaminsan yihiin. In ay Soomaaliya toos ugu biiraan dooni maayaan oo damiirkii baa wali siin la’.
In ay Hartiga iyo Ogaadeenka Sool, Sanaag iyo Cayn la goostaan oo maamul ugub ah la dhistaan waxaa u diiddan cabsi xooggan ee ay ka qabaan dacaayadda ah “way gumoobeen oo Daarood bay wax la wadaageen”. Huwanta Awal iyo Jeclo ee SNM hubkii cuslaa ee qaranka Soomaaliyeed woqooyiga ku amaanada ahaa bay gacanta ku dhigeen oo cidi ku ma dhiiran karto walaa Caare walaa cid kale. Habar Yoonistu waxay is badday xaaladdii ninkii labada faras isku mar ku duulay waxii ka raacay. In ay dhan uun u go’aan talo u dhaantaa ma ay jirto.
Puntland waxaa iskugu darsamay labada masiibo ee ah in ay madaxdeedu noqdeen fulayo afka ka nool ee in ay hub casri ah qiilka shabaab iyo daacish ku soo iibsadaan fariidnimadeeda gabay iyo cuna qabanteynta caalamiga ee Soomaaliya hubka ka saaran. SNMtu xaqiiqooyinkaas ayay ogyihiin oo ay la qooqeen oo waa na gartood.
Dhanka kale Caare waxba haka werwerina wuuniska soo noqonayaaye. Waayo, damiin iyo doqon midna maaha. Qofka nacaska ah ee dadkiisa iyo dalkiisa aanan daneyneyn waxbuu kharbudaa, dadbuu laayaa, maalbuu dhacaa. Intaasna Caare weli muu sameyn. Dhowr goor ayuu meelo yara marmaray, waxaas wax dhaafsiisana muu sameyn. Woxoogay markuu iska soo Yara nasto ayuu soo noqon doonaa. Maa fii Mushkilla.
Itaal xumida daaroodka Caaare ayaa na xoraynaya ayay ka maraysaa…kkkkkkkkkkkkk
Halka aad ka kaluumaysanayso iska hubi waxba kuma jiraan.
Caare,, habar majeerteen ah ayuu Qardho ku guursady balaayo ma wado.
slibaaxa buurta says:
NAFEEY NIN KU DOONAY KUWAA CAARE NAF MOODEEN WALAAAHI INUU QARDHO KU QAYILO MOOYEE HABLO CASCAS IS DHINAC DHIGO NAANIIN LEH XABAD MA RIDI KARO 25 KUN ASKARI TABABAR SARE QABO 100 MILION DOOLARS MUSHAHAARKOGU YAHAY YAA AWOODA INTAAS LEEG IS HOR TAAGI KARA BUTUQLAN BAA BOOWE WAA BAQAYNAA NAGADAA DAGAALKA TELEFOONKU KU DIRAY
Dab la Ridey halkuu ku dambeeyey says:
Janaraal Calooshii u sheqeyste ah weeye caare
waxaa uga fiicneyd inuu xamar xil u doonto
Butuluqlan ma aha ha khaldin magaca
( PUSHUQLAND ) WEEYE